Wadahadalladii nabadeed ee Galkacyo oo is afgarad buuxa laga gaaray. – Radio Daljir
Wadahadalladii nabadeed ee Galkacyo oo is afgarad buuxa laga gaaray.
Diseembar 29, 2009 12:00 b 0
Galkacyo Dec 29- Waxaa is afgarad buuxa laga gaaray shirkii nabadeed ee dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey ka soconayey gudaha magaalada Galkacyo, kaasi oo ku qotomay xil ka gaaridda iska-horimaaddo soo laabbaatay oo ka dhacay magaalada Galkacyo.
Shirkaan soconayey muddo saddex maalmood, ayaa ergooyinkii ka qaybgalayey kaga arrinsanayeen xaaladda nabadgalyo ee magaalada Galkacyo oo laba maalmood oo is xig-xigay ay ka dhaceen iska-horimaaddo sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawacba iskugu jira, kaasi oo u dhaxeeyey ciidanka maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo ee Puntland, dad shacab ah iyo sidoo kale ciidamada maamulka Galmudug iyo ganacsato reer Galmudug ah.
Ergooyinka shirka ka qaybgalayey oo gaarayey illaa 30 xubnood, ayaa dood dheer kadib isla meeldhagay dhawr arrimood oo ku saabsan xal ka gaaridda dhammaan waxyaabihii ka dhacay magaalada Galkacyo iyo sidoo kale khilaafaadyadu wixii ay ka dhasheen, waxaana ka mid ah waxyaabihii laba dhinac ay isku afgarteen.
1- Waxaa la isku afgartay in la sameeyo soodin kala qaybisa labada maamul ee ka wada jira magaalada Galkacyo, soodintaasi oo noqon doonta mid maamul walbaa uu dhinaciisa maamulo sugana amnigeed, sidoo kalana lagala xisaabtamo haddii falkii ka dhaca.
2-Waxaa la isla garay in la tiro goobo dhismayaasha ku yaalla deegaanka maamuliddiisa muranka gacan ka hadalka dhaliyey uu ka dhashay, iyadoo maamulkii 51% yeeshaa dhismayaashaasi uu si rasmi ah halkaasi uu maamuli doono, isla markaana oo canshuurta ka qaadi doona dadka deggan.
3- Dadkii deggan meesha la isku maandhaafay oo ah meel labada maamul dhaxdood ah ayaa iyana la isla gartay in ay halkooda degganaadaan isla markaana ay u hoggaansamaan hadda maamulkii yeesha aqlabiyadda.
4- Goobta lagu murmay ayaa isna la isla gartay in laga mamnuuco hubka marka laga reebo ciidanka maamulka aqlabiyad ahaan meeshaasi ku guulaysata.
Hesheeskaan maanta la isla gaaray ayaa dhaqan-galkiisa waxaa uu si rasmi ah u bilaaban doonaa maalinta berri ah oo ay taariikhdu tahay 30 bisha December, sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Cali Salaad.
Qodobada la isla meeldhigay waxaa ka sii horreeyey dhawr qodob oo kale oo iyna la isla gartay maalmihii dagaalku dhacay, waxayna muujinayeen joojinta xabadda, kala qaadid ciidamada iyo sidoo kale furitaanka wadahallo nabadeed, kuwaasi oo dhammaantood hirgalay.
?Guddiga shaqada & shaqaalaha iyo wasiiru dawlaha maamul wanaaga Puntland oo ka shiray arrimaha shaqaalaha.
?Faarax C. Shire, wasiirka maaliyada Puntland oo ka xog waramay miisaaniyadda dawlada ee 2010.